WAA SIDEE MASIIXIYADDA MALA AWAALKA AH – Sumcadda Islaamka
WAA SIDEE MASIIXIYADDA MALA AWAALKA AH
Qofka diinta islaam ka tagay ee aaday masiixiyad ayaa igala aqli liita midka diin oo dhan ka baxay,waayo ninka diin oo dhan diiday warkiisa waa iska cad yahay oo waa mid ka wahsaday oo ay dhibtay inuu rabigii khalqay adoon u ahaado ka dibna kibir dartii u inkiray jiritaanka Alle.
Kaas isagaa laga rabaa halkii uuka gali lahaa rabiga uu isku taagay maalinka qiyaame.
Laakiin qofka inta arkay macaanka iimaanka islaamka faraya in uu alle kaliya ku xirnaado isagoon wax ka sokeeya u sii marin,inuu masiixiyad wada isbaaro ah naf ka raadiyo caqli daro ka liidata ma arag.
Waayo Alle shirko lala yahay oo ay marar badan la midaysan yihiin arwaax uu isaga khalqay,marna kala baxayo waa wareer uusan caqli fayoow qaadan karin.
Dadka masiixiyada rumaysan waxay ku khasban yihiin inay sii maraan isbaarooyin ka bilaabata wadaado uu midba mid u gudbiyo kuna dhamaata ciise oo marna la midooba aabihiis iyo ruuxul qudus,inta badana kaligiis gaar utaagan oo isagoo inta la qaawiyay oo la dilay misna miciin laga sugayo,waa sida ay iyagu qabaane.
Been baa lagu akhriyay oo waxaa la yiri masiixiyaddu waa nabad,waa been arinkaas oo taariikhdu waxay marag ka tahay in masiixiyaddu muddo dheer ahayd dadqalato dhiiga ka dhamaysatay kuwii rumaysnaa,goortay ku rafaadeen ayuu doraad dhow kacaankii faransiiska ka xoreeyay.
Masiixiyadda waa midda cayrisay kuwii rumaysnaa laba qarni ka hor oo goortay ku soo giirteen shacabkeedii miciyahana ka bixiyeen ku soo koobay midaas ay tabari meel dhigtay ee dadka ku sasabanaysa been iyo waxaan jirin oon kutubteeda ku ool.
Masiixiyadda nabad maaha kutubteedana kuma taal inay nabad tahay ee active uun baysan hadda ahayn oo haddii la dabakho waxa kutubtooda ku qoran qof dunida ku noolaanaya lama arki lahayn marka iyaga isku haraana mad-hab mad-hab ayay isu cuni lahaayeen,waayo in caruur iyo ciroole,rag iyo haween la xasuuqo,cidii iyaga ka duwanaata ayaa kutubtooda ka buuxda.
Islaamkuse wuxuu ku naaloonayaa nabad iyo nolol,cilmi iyo cibaado meel kasta ka muuqata oo ku astaysan kutubtiisa,waana mabaadii cad cad oo aan la qarin karin sida islaamku u baritaarayo nabadda iyo nolosha iyo tixgalinta iyo ixtiraamka kuwa ka duwan.
Markaan sidaas leeyahay kama hadlayo ficilada jaahilnimada ku salaysan ee ka muuqata qaar muslimiinta ka mid ah iyo inay islaamkii u dabakheen si khaldan,ee waxaan ka hadlayaa mabaadiida qoran ee diinta islaamka.
Masiixiyaddu goortay itaal weyday oo ay dadkeedii ku dhex noqotay miskiin la awood tiray ayay bilowday inay iska yeel yeesho diin qurux badan oo nabad ku dhisan,laakiin islaamku wuxuu haystaa nabad iyo tacaaliim asali ah oo aan la fara farayn oo ku salaysan maslaxada basharka iyo xuquuqdiisa nololeed.
ISLAAMKA IYO KHILAAFKA
BARO RABIGA RAXMADDA